Muungaab: Waa in la is weydiiyo Sababta loo Qarxinayo Muqdisho”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Muungaab: Waa in la is weydiiyo Sababta loo Qarxinayo Muqdisho”SAWIRRO”
Munaasabad lagusoo bandhigayay wax qabadka maamulka degmada C/casiis ayaa xalay lagu qabtay degmada C/casiis.
Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qeyb galay Wasiiro, Xildhibaano,maamulka gobolka Banaadir taas oo gundhigeedu ahaa soo bandhigida wax qabadka mudadii sanadka ahay ee degmada C/caziz uu hogaminayey gudoomiye Cusmaan Muxudin Cali Cariif
Gudooomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo khudbad dheer ka jeediyey ayaa sheegay in maamulka C/caziz ay buuxiyeen kaalintooda waxbadana u qabsoomeen wixii dhiman ay dhameystiri doonaa sidoo kale gudoomiye Muungab ayaa is weydiyay sababta inta badan qaraxyada looga geysto caasimadda Muqdisho .
Sidoo kale gudoomiye Muungaab ayaa sheegay in sababta loo qarxinayo caasimada ay tahay mid dano gaar ah laga leeyahay waayo waxaa is weydiin mudan sababta qaraxyada loogu joogteeyo caasimadda Soomaaliya.
Ugu dambeyntii Duqa Magaaladda Muqdisho ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in musiibo shabaab shacabka u geystay in bulshadii ku dhamaatay laga kala dhigay qolo qolo oo siyaasiin qaar ah ay ku tilmaamaan in dad qaar ah la bartilmaamedsado.
“taasna waa mid laga xumaado shacabka dhinta waa Soomaali waxaa dilayna waa shabaab cidna makala soo cayaan ee siyaasiintu yeysan meydka dhinta kala soocin” ayuu yiri Muungaab.
Wasiirka Maalliyadda oo la kulmay Wakiilo ka socda Xawaaladaha(Sawirro)
Xaaladda Wariye Farxaan Suleymaan oo soo hagaageysa